कैलालीमा तोरीको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि
चैत २०, कैलाली । कैलालीमा तोरी उत्पादन बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा कैलालीमा यस वर्ष तोरी दोब्बरले उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।
औसतमा तोरी प्रतिहेक्टर १० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गर्दछ । ‘गत वर्ष प्रतिहेक्टर ६ क्विन्टलका दरले तोरी उत्पादन भएकोमा यस वर्ष बढेर प्रतिहेक्टर १२ क्विन्टलसम्म उत्पादन भएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष तोरीखेती भएको हिउँदे मौसममा अधिक वर्षा हुँदा तोरीसँगै अन्य बालीको उत्पादनमा कमी आएको थियो ।
यस वर्ष मौसम अनुकूल रहेकाले गत वर्षभन्दा दोब्बरले उत्पादन बढेको छ ।’ यस वर्ष तोरी बाली मात्र होइन अन्य बाली पनि राम्रो उत्पादन हुने देखिएको प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
तोरी बाली उत्पादन राम्रो भएपछि यहाँका किसान खुशी भएका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका किसान सन्देश चौधरीले यस वर्ष १२ क्विन्टल तोरी विक्री गरे । प्रतिक्विन्टल रू. १० हजारका दरले विक्री गरेका चौधरीले एक लाख २० हजार आम्दानी गर्नुभयो । ‘चार बिघा जमीनमा तोरीखेती गरेको थिए ।
तोरी राम्रो उत्पादन भयो’, उनले भने, ‘घरमा आवश्यक तोरी राखेर बाँकी विक्री गरे । यस वर्ष तोरीखेतीले सन्तुष्टि दिएको छ ।’
सन्देश जस्तै तोरीखेती गरेका अन्य किसान पनि तोरी उत्पादन र तोरीको बजार मूल्य राम्रो पाएपछि खुशी भएका हुन् । तोरीखेती स्याहारेका अधिकांश किसान त्यही तोरीखेतीमा छरेको मसुरो स्याहार्न थालेका छन् । गत वर्ष तोरी उत्पादन कम भएका कारण कैलालीमा तोरीको तेल पाउनसमेत कठिन भएको थियो ।
कैलालीका मिल सञ्चालकले यस वर्ष तेल बिक्रीका लागि आवश्यक तोरी भण्डारण गरिसकेका छन् । ‘गत वर्ष हामीले तेल बिक्रीका लागि तोरी पाएनौँ, तेल पेलेर विक्री गर्ने मिलमा कारोबारसमेत भएन । रू. २०० प्रतिलिटर बिक्री हुने तेल तोरी अभाव भएपछि रू. २५० मा विक्री गर्दा पनि तेल अभाव भयो’, मिल सञ्चालक रवीन्द्र धामीले भने, ‘यस वर्ष एक गोदाम तोरी भण्डारण गरेको छु । मेरो त व्यवसाय नै तोरीको तेल विक्री गर्ने हो । पछि अभाव हुन्छ भन्ने डरले तोरीको भण्डारण बढाएको छु ।’